Ungayisusa Kanjani Imibuthano Emnyama Kubesilisa - Iseluleko Somama Namuhla | Amadoda aSitayela
Siyazi ukuthi umhlaba wezimonyo uguqulwe eminyakeni yamuva futhi amadoda abambe iqhaza ekusetshenzisweni kwawo. Akukhona ukuthi umhlaba wezimonyo kufanele uvuselele imikhiqizo yawo kepha lokho badinga abantu abazifunayo. Kuyiqiniso lokuthi bayanda abesilisa abafuna ukuzizwa bengcono, nokuthi kokuningi abakukhathalelayo bafuna imikhiqizo yokususa imibuthano emnyama emadodeni.
Imvamisa imibuthano emnyama emadodeni ivela ngendlela engabukeki njengakwabesifazane. Ukuthola ukuthi kungani bephuma kuyinjongo enkulu yokuvimba ukuthi bangaphinde baphume, kepha uma kuyinto yofuzo engenakulungiswa singahlala njalo cwilisa okhilimu esinikezwa yimakethe noma ngamathiphu namasu amancane esikukhombisa ngezansi.
1 Kungani imibuthano emnyama ivela emadodeni?
2 Amakhambi asekhaya okususa imibuthano emnyama emadodeni
2.1 Lungisa itiye noma i-chamomile.
2.2 Cottons ofakwe ubisi olubandayo
2.3 Izinguzunga zeqhwa
2.4 Ukugqoka izimonyo
Kungani imibuthano emnyama ivela emadodeni?
Njengabesifazane, lolu hlobo lokuphendula lungaba nemiphumela yezici eziningana. Indoda ingaba ngaphansi kwengcindezi enkulu ngenxa yomsebenzi, izifundo noma impilo yomphakathi. Mhlawumbe kuyinto yesikhashana noma mhlawumbe kukhona usawoti oweqile ekudleni kwakho noma umzimba wakho awukuvumeli okweqile njengotshwala noma ugwayi.
Ukudla okungalingani, izinkinga zokujikeleza ngokugcina uketshezi noma i- ukuthatha imithi ezinye izimbangela.
Ukulala okuncane Kungaba esinye isici esingadala ukwakheka kwemibuthano emnyama, ngoba kuyisibonakaliso sokukhathala nokuntuleka kokulala, kepha ngenxa yezinye izizathu, noma ngemuva kokulala kahle, uvuka ngokuvuvukala okukhulu ngaphansi kwamehlo.
Izakhi zofuzo zingenye futhi imiphumela yokubukeka kwayo, njengokuguga. Eminyakeni edlule, isikhumba esingaphansi kwamehlo siba sincane futhi silahlekelwa ngamafutha ne-collagen.
Yize sifuna imininingwane yalolu hlobo lwesimo kakhulu, singakukhomba lokho ukuntuleka kwe-cortisol emzimbeni (i-hormone yenjabulo) ayibangeli ukuthi imithambo yegazi engaphansi kwamehlo ivuleke kahle, iveze leyo nhlalonhle.
Isendlalelo esincane esimboze indawo yamehlo sincane kakhulu futhi sibucayi, ngakho-ke kuyacaca futhi ikuvumela ukuthi ubone ngokucacile ngokuphelele ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Amakhambi asekhaya okususa imibuthano emnyama emadodeni
Ungaqala ukusebenzisa amakhambi emvelo ukumisa ukubukeka kwawo:
Lungisa itiye noma i-chamomile.
Ungasizakala ngama-sachets alezi infusions ezimnandi ukuze kubeke kubande ngaphezu kwamehlo akho, cishe imizuzu engu-15.
Lezi infusions zine- izakhiwo zokulwa nokuvuvukala njenge-chamomile. Itiye, ngenxa ye-caffeine yayo, iyasiza khipha isikhumba, wandise ukujikeleza futhi usivuselele.
Cottons ofakwe ubisi olubandayo
Beka amakotoni phezu kwamehlo akho imizuzu engama-25 nsuku zonke. Izakhiwo zakhe ukunciphisa ukugcinwa koketshezi nokunciphisa umbala omnyama wendawo.
Songa ama-ice cubes ngendwangu ezacile bese uyisula uzungeze iso imizuzu engama-20 kuye kwengama-25. Ukubanda kwawo kuzokwehlisa i- ukugcinwa koketshezi futhi kukhubaze imithambo, ngaleyo ndlela ikukhulula ezikhwameni ezijabulisayo.
Usebenzisa amafutha ka-alimondi amnandi elinye ikhambi elihle. Iqukethe uvithamini E futhi ine amandla amakhulu okulwa nokuvuvukala. Faka amaconsi ambalwa engxenyeni ethintekile ngaphambi kokulala nsuku zonke, ngokuthintwa okuncane futhi ngaphandle kokuzihlikihla, uzobona imiphumela yayo ngakusasa ekuseni.
Okunye ukwelashwa okusebenzayo ukusetshenziswa kwe- isipuni esibandayo phezu kwamehlo. Yibeke emgqeni wamehlo bese uvumela isenzo sayo esibandayo imizuzwana eminingana.
Kulesi sifundo esincane Sikunikeza imihlahlandlela yokwazi ukusebenzisa izimonyo kahle. Kodwa-ke, uma ufuna ithiphu esheshayo, singakweluleka:
Ngesikhumba esihle- Sebenzisa isifihli esinamathoni alula, kungaba umbala obomvana noma obomvana.
Ngesikhumba esimnyama: sebenzisa ukhilimu onethoni ekhanya kancane kunesikhumba sakho ngombala omncane osawolintshi noma ophuzi.
Sebenzisa isicashuni ngokunikeza ukuthinta okuncane emibuthanweni emnyama bese uyendlala kahle esikhunjeni. Qeda ukuyelula uze ubone ukuthi iphelele.
Uma uthanda ukuba yingxenye yemikhiqizo esemakethe, ungakhetha eziningi zazo futhi zikhethelwe amadoda kuphela, ukusetshenziswa kwayo okulungile kuzokwenza imiphumela emihle ibonakale.
Kufanele uhambisane nokuthi le mikhiqizo isebenza ngempumelelo kodwa azimangalisi ngokupheleleKuzoba wusizo njalo ukunakekela impilo yomzimba wakho ukuze la makhilimu akusize futhi ukusebenzise nsuku zonke.
Sinemikhiqizo efana neBaeBody, ijeli ecebile nge-hyaluronic acid ne-vitamin E ekhishwa esiza ukuqeda izinyawo zegwababa, imibuthano emnyama nemigqa emihle.
Elinye ijeli yi-Biotherm Homme Total Recharge, lo khilimu unciphisa imibuthano emnyama futhi usize ukulwa nezimpawu zokuqala zokuguga.
Clarins amadoda Ingelinye ijeli elihle lemibuthano emnyama nokumelana nentaba yamehlo, enemiphumela emihle ngokushesha.
Olunye ukhilimu onamandla yiGrown Alchemist, ngefomula eliphumelelayo elikusiza ukuthi unike isikhumba amanzi futhi ulwe nezikhwama nezinyawo zegwababa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungayisusa kanjani imibuthano emnyama emadodeni